Mampiasa tononkalo hamaritana ny vondrom-piarahamonina sy ny fahatsapany ny bilaogera vaovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Septambra 2018 9:09 GMT
Azo atao ny mihevitra fa hatramin'ny nanomezana endrika ara-batana voalohany ny fiteny, ny tononkalo (avy amin'ny poiesis grika, “manamboatra” na “mamorona”) no mpampita hafatra izay maneho ny fitarainantsika mampalahelo indrindra, ny hafaliantsika lehibe indrindra, ary ny tsiambaratelo ankamantatry ny fitiavana sy ny fisaonana. Na dia tsy misy fiahiahiana aza fa ho very eo amin'ireo kitendry amin'ny vanim-potoana nomerika ny lovan-tsofin'ny tononkalo, dia misy ihany koa ny fitomboan'ny porofo (amin'ny endrika fibilaogina tononkalo, na bilaogera poetika) izay afaka mahatratra lavitra kokoa noho ny hatramin'izay ny hatsarana sy ny aingam-panahy.
Tsy vitany hoe mpanao gazety olon-tsotra ihany ireo bilaogera vaovao ao amin'ny tetikasa fanentanana Rising Voices ao Kolombia, Bolivia, sy Bangladesh fa mihoatra noho izany. Nahita ny herin'ny fiteny tsotra ihany koa izy ireo mba haneho ny endriky ny fihetseham-pon'ny olombelona izay mampitambatra antsika sy ny fahasamihafana eo an-toerana izay mahatonga ny fiarahamonintsika tsirairay ho tsy manam-paharoa.
Ny poezia no sarotra indrindra hatrany amin'ny teny adika ary noho izany dia navelanay teo ihany ny lahatsoratra orizinaly amin'ny teny Espaniola sy Bangla, noezahanay ho tsara indrindra ny fandikan-teny Anglisy.
Fanomezam-boninahitra avy amin'i Carmen Elena Paniagua ao amin'ny HiperBarrio:
Hira tsy eo
Aza mitomany rehefa lasa sy tsy maintsy hamela anao irery any an-joron'ny mandrakizay aho
aza adinoina fa mijanona voarakitra ao anatin'ny kibonao ny feoko.
aza adino fa mitoetra ao anatin'ny vatanao manontolo ny marikako;
Ary amin'ny fahatsiarovana, fantatrao ny fomba fihiràna ny gadontsika;
Imbetsaka nampitovy feo tao amin'ny tady mineur ny alahelonao sy ny ranomasoko, ka mampiato an-kerisetra ny akon'ny fitarainanao.
Aza malahelo noho ny tsy maha eo ahy; avelao ny vatanao haka aina, mandra-paharivan'ny andro hiverenako ary hiara-hihira indray ny hiran'ny mandrakizay.
Vehivavy isika avy amin'i Sharmin Chowdhury Shikha ao amin'ny Nari Jibon:
Mifohaza androany, mifohaza
Fotoana handrosoana izao.
Nahoana ianao no tsy mihetsika?
Nahoana no matahotra sy menatra?
Be zavatra atao isika
Maninona no mipetraka eo amin'ny zoro maizina?
Nahoana no miady mafy ny fiainanao?
Mahazava izao tontolo izao, fahasambarana na aiza na aiza.
Nahoana ianao no ao anaty maizina, manozongozona ny lohanao?
Mivoaha amin'ity trano ity
Jereo ny vehivavy manenika izao tontolo izao
Tsy mipetraka ao an-trano ny vehivavy hafa
Mivoaka avy ao amin'ny maizina izy ireo
Any amin'ny tany mandroso, tontolo mandroso
Ambony ny vehivavy amin'ny toerana maro
Manao ny tsara izy ireo noho ny fampianarana
Efa naharesy ny haizina rehetra izy ireo.
Ry vehivavy matanjaka
Mitabatabà indray ary lazao hoe
Vitantsika, afaka manao ny zava-drehetra isika
Fanambarana avy amin'i Diego Ospina ao amin'ny HiperBarrio:
Hivarotra teny aminao hahazoana oroka aho ry vehivavy tsara tarehy.
Raharaha tsara ny mitadidy ao an-tsaina fa hampihozongozona ny fanahiko ny oroka, hanome fifaliana tahaka izany ho an'ny foko izay hitempo haingana ary hanoroka ny molotro ny tsiro mamin'ny ny molotra mando; raha vao re indray mandeha ny teny, dia hanova tanteraka ny fomba fijery ny fiainana; am-pahatsorana, hahatonga fahatsapana amin'izany ny fijaliana sy ny fahafatesana izay miteraka fanambarana mahagaga.
Indray andro avy amin'i Zannat Ara Amzad ao amin'ny Nari Jibon:
Raha hita sy fantatra ny tsy fantatra, sy tsy hita
Indray andro any …
Hanana elatra izaho sy ianao
Hivadika manga ny lanitra, Miresaha amin'ny maso
Tsy nilaza ny rehetra fa ho avoaka avokoa ny zava-drehetra
Raha izaho sy ianao
no hamatotra ny kofehy
Tsy fantatro ny daty sy ny ora
Tsy raharahiako ny mahasoa
Tsy hanaiky ny fanakanana rehetra aho
Raha tsy milalao ny feon'ny fitiavana ianao.
From the Heart of the Andes avy amin'i Juan H. Apaza ao amin'ny Voces Bolivianas:
Avy amin'ny fon'ny Andes
Miantsoantso ny rà mandriaka
taonjato dimy tsy fisiana mangina
Fitakian'ny fo hoatrehina
Avy amin'ny ambaratonga lalina indrindra amin'ny andes [tandavan-tendrombohitra]
misy ny fanahin'ny tany
fanehoana firindrana, fanajana, ary fiainana,
ayni, fitoviana ary fankasitrahana
Feno ny Pachacuti
volo mirandrana mandihy
ny feon'ny pankaras
sicus sy tharkas mihiaka hoe: Niverina ny fon'ny Andes [tandavan-tendrombohitra]
Namotika ny vatanao teo imason'izy rehetra ry zareo
nitarika izany teny amin'ny arabe sy ny kianja
naneso anao …
ary nanjary waca ny fonao.
ary tsy afaka namono anao ry zareo …!
Niverina ny fon'ny andes,
ary mitempo amin'ny fanahy an'arivony,
mandeha mora ny herim-ponao, Jilata …
Namana avy amin'i Jesmin Ara Amzad ao amin'ny Nari Jibon:
Ny namana dia midika fitoviana
Fitiavan'ny fo roa
Ny namana dia midika fanantenana kely
Manana nofy vaovao
Ny namana dia midika hoe fisafoana tsy tena izy
Ary mankafy momba izany
Ny namana dia midika hoe mitovy fihetsika
Ny rossignols roa mailaka
Ny namana dia midika hoe lanitra malefaka
Fiveloman'ny masoandro sy ny rahona
Ny namana dia midika rano mitete avy amin'ny raozy
Amin'ny maraina mangiratsy
Ny namana dia midika hoe sambatra
Ary aoka hiraharaha ny hafa
Toa toy ny hovitrovitra kely izany
Any ho any ao amin'ny fo
Dikan-teny avy amin'i Rezwan sy David Sasaki.